မော်စကိုတွင်အရည်ရွှမ်းသည့်ပန်းစည်းများပို့ခြင်း - ပန်းများကိုမှာယူပါ
45 စင်တီမီတာ 40 စင်တီမီတာ
ပစ္စည်းပို့ရန် ~2နာရီ။မော်စကိုတွင်အခမဲ့
အနံ 40 စင်တီမီတာ
အမြင့် 45 စင်တီမီတာ
ပန်းအလှပြင်သူ၏အလုပ်နှင့်ပတ်သက်။ 10 သုံးသပ်ချက်များ:
Igor နှင့် Sveta 03-05-2020
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်နေရသည့်ခက်ခဲသော coronavirus ရက်များတွင်သူငယ်ချင်းများကိုသူတို့၏မွေးနေ့တွင်ဂုဏ်ပြုရန်အတွက်အထူးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
Irina အေ Luzhina 28-04-2020
လျင်မြန်စွာနှင့်အချိန်မီ Delivery! ပန်းတွေကလတ်ဆတ်တယ်။ ပန်းများကိုရှာဖွေရန်ခဲယဉ်းသည့်အချိန်တွင်အကြီးအကျယ်ပန်းပွင့်များရှိသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!!
Bouquet စူပါ Duper ပေးပို့အချိန်မီ !!!!!!! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!!!!!!
က Nicholas 14-02-2020
စတော်ဘယ်ရီပင်ချိုတယ်။ Courier နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိပါကတစ်ခုတည်းသောအရာသည်ဆိုက်ရောက်ချိန်ကိုရှင်းလင်းနိုင်မည် ဖြစ်၍ မဟုတ်လျှင်အားလုံးအဆင်ပြေမည်ဖြစ်သည်။ 18:00 မှာမှာယူ, ချက်ချင်းအကြောင်းကို 22:00 ဆောင်ခဲ့လေ၏။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! မွေးနေကလေးသည်ပျော်တယ်။ ငါတို့လည်း။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! အရာရာတိုင်းဟာအချိန်နဲ့အမျှအလွန်တိကျမှန်ကန်တယ်။ လူတိုင်းကိုအကြံပေးလိုပါတယ်
အမေအတွက်သူမ၏မွေးနေ့တွင်မည်သည့်ပန်းစည်းကိုရွေးချယ်ရမည်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ အော်ပရေတာကဒီရွေးချယ်မှုအတွက်ကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ကျွန်မအမေနဲ့ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျခဲ့ကြတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်ချစ်သူသည်နှင်းဆီ ၁၀၁ လုံးကိုပေးခဲ့သည်။ သူသည်ရောက်သောအခါ၊ ထိုကဲ့သို့သောပန်းစည်းပြီးနောက်ငါငြင်းဆန်နိုင်ဘူး။
ကောင်းမွန်တဲ့ပန်းပွင့်ဖြန့်ဝေရေး ၀ န်ဆောင်မှု! ခင်ဗျားကဘယ်တော့မှကြာမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါပန်းစည်းကိုအရမ်းကောင်းတဲ့အခြေအနေရတယ်။ အားလပ်ရက်တစ်ရက်ဖြစ်ပါကနှင်းဆီများကိုသာကျွန်ုပ်မှာသည်။
ဘုရ်ှသည်ထ - 39 pc ။
လတ်ဆတ်သောပန်းပွင့်များ၏ပန်းစည်းကျွန်ုပ်တို့၏အလှပြင်ဆိုင်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါသင်သည်လှပသောလေထုနှင့်ချက်ချင်းလတ်ဆတ်သောပန်းပွင့်များ၏ရနံ့များထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ ပန်းစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ပန်းများကို visit ည့်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရွေးချယ်သည်။ Harmony မှပန်းစည်းများသည်အမြဲတမ်းမယုံနိုင်လောက်သောအနံ့ရှိသည်။ ပြင်သစ်ဘာသာမှပြန်ဆိုထားသောပန်းစည်းတစ်ခုသည်“ ဖဲကြိုးနှင့်ချည်ထားသောပန်းများတစည်း” ဖြစ်သည်။ Florists Harmony - Floristum သည်သူတို့၏စိတ်ကိုဖွဲ့စည်းမှု (သို့) ပန်းစည်းတစ်ခုဖန်တီးရန်သူတို့၏စိတ်ကိုထားခဲ့သည်။ အရောင်တစ်သဟဇာတပန်းစည်းဖန်တီးခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ပန်းတစ်ပွင့်သည်ပန်းတစ်ပွင့်နှင့်ပန်းတစ်မျိုးတည်း၏ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများဖြစ်သည်။
8204 XNUMX ₽ မိဖုရား
နှင်းဆီ - 77 pcs ။
လတ်ဆတ်သောပန်းပွင့်များ၏ပန်းစည်းကျွန်ုပ်တို့၏အလှပြင်ဆိုင်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါသင်သည်လှပသောလေထုနှင့်ချက်ချင်းလတ်ဆတ်သောပန်းပွင့်များ၏ရနံ့များထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ ပန်းစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ပန်းများကို visit ည့်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရွေးချယ်သည်။ Harmony မှပန်းစည်းများသည်အမြဲတမ်းမယုံနိုင်လောက်သောအနံ့ရှိသည်။ ပြင်သစ်ဘာသာမှပြန်ဆိုထားသောပန်းစည်းတစ်ခုသည်“ ဖဲကြိုးနှင့်ချည်ထားသောပန်းများတစည်း” ဖြစ်သည်။ Florists Harmony - ကျွန်ုပ်တို့၏အလှပြင်ဆိုင်သည်သူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖွဲ့စည်းမှု (သို့) ပန်းစည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သူတို့၏စိတ်ကိုထား၏။ အရောင်တစ်သဟဇာတပန်းစည်းဖန်တီးခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ပန်းတစ်ပွင့်သည်ပန်းတစ်ပွင့်နှင့်ပန်းတစ်မျိုးတည်း၏ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများဖြစ်သည်။
14510 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
လတ်ဆတ်သောပန်းပွင့်များ၏ပန်းစည်း, ငါတို့အလှပြင်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်, သင်သည်ချက်ချင်းလှပသောလေထုနှင့်လတ်ဆတ်သောဖြတ်ပန်းပွင့်များ၏ရနံ့သို့ထိုးပါလိမ့်မယ်။ each ည့်သည်တစ် ဦး စီအတွက်ပန်းစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ပန်းကိုတစ် ဦး ချင်းစီရွေးချယ်သည်။ သဟဇာတမှပန်းစည်းအမြဲမယုံနိုင်စရာအနံ့ရှိသည်, သူတို့ကထူးခြားတဲ့! ပြင်သစ်ဘာသာမှပြန်ဆိုထားသောပန်းစည်းတစ်ခုသည်“ ဖဲကြိုးနှင့်ချည်ထားသောပန်းများတစည်း” ဖြစ်သည်။ ပန်းချီဆရာများသဟဇာတ - သစ်ပင်ပန်းမန်တစ် ဦး ဖွဲ့စည်းမှုသို့မဟုတ်ပန်းစည်းသို့၎င်းတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုထားတော်မူ၏။ အရောင်တစ်သဟဇာတပန်းစည်းဖန်တီးခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
7242 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
နှင်းဆီ - 21 pcs ။
3350 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
36390 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
နှင်းဆီ - 101 pcs ။
11331 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Tulip - 101 pcs
7785 XNUMX ₽ နှင်းပန်း
Single-ခေါင်းစဉ်နှင်းဆီ - 31 pcs ။
3705 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
8735 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀